Nepalistudio » को हो शहीद ? के मापदण्ड हुनुपर्छ शहीद हुन् ? को हो शहीद ? के मापदण्ड हुनुपर्छ शहीद हुन् ? – Nepalistudio
को हो शहीद ? के मापदण्ड हुनुपर्छ शहीद हुन् ?
नेपाली बृहत् शब्दकोषमा भए अनुसार शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति हुन्। तर पछिल्लो समय शहीद कस्तो र को भन्ने विषयमासमेत विवाद हुँदै आएको छ।
शब्दकोषमा भनिएजस्तो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिने मात्र नभएर अन्य सडकमा प्रदर्शन गरेर दबाब दिँदैमा पनि सरकारले शहीद घोषणा गर्ने गरेको छ।
नेपालमा शहीद भन्ने बितिक्कै दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई बुझिने गरिन्छ। शहीद दिवस पनि माघ १६ मा यी नै अमर सहिदको सम्झनामा मनाइने गरिएको छ। तर नेपालमा शहीद कति छन् भन्ने विषयमा सरकारले एकिन तथ्यांक दिन सक्दैन। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले एकिन डाटा नभएको बताए। ‘यसबारे हामीसँग डाटा कम्पाइल छैन’, उनले भने।
प्रजातन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिने चार शहीदको सम्झनामा नेपालमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ मा शहीद दिवस मनाइने गरिएको छ। वि.सं १९९७ मा शहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौंको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो।
माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धपछि आएका प्रत्येक सरकारले विभिन्न घटनामा मारिएका धेरैलाई शहीद घोषणा गर्दै आएको छ। विभिन्न कारणले हत्या भएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गरिँदा कति शहीद छन् भन्ने एकिन तथ्यांक सरकारले भन्न सकेको छैन।
कुनै व्यक्तिको हत्या भएमा शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक बन्द गरेकै भरमा पनि शहीद घोषणा गरिएको छ। २०४६ को आन्दोलनमा मारिएका, माओवादीको आन्दोलनमा मारिएका तथा विभिन्न दलको आन्दोलनका क्रममा मारिएका पनि शहीदको सूचिमा छन्। कतिपय दलहरुले राजनीतिका निम्ति पनि शहीद आफ्नो पार्टीको आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेका छन्। कतिपयले १० लाख रुपैयाँ पाउने लोभका कारण पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्ने गरेका छन्।
शहीदको अवमूल्यन भयो
नेपालमा जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सर्वत्र आलोचना पनि सुरु भएको छ। आफू लोकप्रिय विभिन्न घटनामा मरेकालाई शहीद घोषणा गरेर पैसा बाँढ्नका लागि सरकारमा जाने बितिकै जुनसुकै पार्टीले पनि शहीद घोषणा गर्ने गरेका छन्। शहीद घोषणा गर्न पछिल्लो समय नेपालमा तल्लो दर्जाको राजनीति भएको संस्कृतिकर्मी तथा साहित्यकार डा.मोदनाथ प्रश्रित बताउँछन्।
‘शहीद घोषणा गर्न तल्लो दर्जाको राजनीति भयो। यसमा त कार्यकतालाई पैसा बाढ्नलाई मात्र घोषणा गरे जस्तो भयो’, उनले भने,‘नेपालमा त गृहमन्त्रालयमा तथ्यांक पनि छैन भन्छन्। यो त साह्रै लज्जास्पद भयो।’ यसरी जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदको अवमूल्य भएको उनी बताउँछन्। ‘यसरी जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्दा वास्तिवक शहीदको अवमूल्यन भयो’ , उनले भने, ‘ हाम्रा वास्तविक शहीदहरु पनि ओझेलमा परे। देशमा लागि बलिदान दिने शहीद पनि अरूकै तुलनामा आए।’ उनले शहीदप्रतिको गौरव घटाइएको बताए।
शहीदको मापदण्ड नै छैन
पछिल्लो समय नेपालमा शहीद घोषणा गर्नका लागि केही मापदण्ड नभएको प्रश्रित बताउँछन्। भन्छन्,‘नेपालमा शहीद हुनका लागि केही मापदण्ड छैन। भर्खरै सरकारले घोषणा गरेको बाँदरमुढेमा मारिएकालाई सरकारले के आधारले शहीद घोषणा गर्यो।’ आन्दोलन र राजनीतिक दलको दबाबमा शहीद घोषणा गर्न नहुने उनी बताउँछन्।
उनले व्यापार गरे जस्तै नाफा र घाटा सम्झेर राजनीतिक दलहरुले शहीद घोषणा गर्ने गरेको बताए। उनले भने,‘ दलहरुले शहीदलाई व्यापार गरे। दलको तालमेल गर्न गरेको सहमतिमा जसलाई पनि शहीद घोषणा गर्न थाले।’ सरकारले प्रश्रितको संयोजकत्वमा सात सदस्य शहीदहरुको परिभाषा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। तर कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बेवास्था गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले मापदण्ड बनाएका थियौँ। तर सरकारले त्यसलाई दराजमा थन्क्यायो। कार्यन्वयन गरेन।’
के मापदण्ड हुनुपर्छ शहीद हुन्?
शहीद हुन निस्वार्थ भावनाका साथ देशका लागि ज्यानको बलिदान दिएको हुनुपर्ने प्रश्रित बताउँछन्। ‘शहीद हुनका लागि अत्याचार अन्त्य गर्न निस्वार्थ भावनाका साथ लागेको हुनु पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबेलामा शासकले हत्या गरे भने उनीहरु शहीद हुन्छन्।’
देश परिवर्तनको आन्दोलनमा नलागेका र स्वार्थका लागि हिडेकाको हत्यामा भएमा शहीद भन्न नहुने उनी बताउँछन्। आफू नेतृत्वको कार्यदलले पनि यस्तै मापदण्ड दिएको उनी बताउँछन्। शहीद हुनका लागि समाज परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गरेर जीवनको बलिदानी दिएका व्यक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। यस्तै, शहीद हुनका लागि समाज परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्दा भीडमा गोली लागेर मृत्यु भएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘आन्दोलनको भीडमा धेरै उद्देश्यका साथ गएका हुन्छन्।
यस्तोमा जाँदा समाज परिवर्तन र मुक्तिका लागि गएका व्यक्तिले सहादत्त प्राप्त गरेकालाई शहीद भन्न मिल्छ नभए शहीद हुँदैनन्।’ यस्तै, शहीद हुनका लागि कसैले सामाजिक परिवर्तन र मुक्तिका लागि गरेको आन्दोलनलाई दबाउने उद्देश्यले उसलाई झुड्याएर वा गोली हानेर हत्या गरेको हुनु पर्ने प्रतिवेदन आफूहरुको कार्यदलले बझाएको प्रश्रितले बताए।
१६ माघ २०७४, मंगलवार प्रकाशित